Erdogan oo dhaleeceeyey maqnaanshaha wakiil joogto ah ee wadamada Islaamka ee Golaha… – Hagaag.com
Erdogan oo dhaleeceeyey maqnaanshaha wakiil joogto ah ee wadamada Islaamka ee Golaha…
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceeyay maqnaanshaha wadamada Islaamka ee xubinimada joogtada ah ee Golaha Ammaanka, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in nidaamka UN uu yahay mid “cadaalad daro” uusan sii socon karin.
Erdogan wuxuu sheegay inaysan jirin hal dal oo shacabkiisa Muslimiin yihiin oo ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, wuxuu xusay in ay waajib tahay in aanan khiyaanin nafsadeena, ma jiro xukun ama rabitaan xubnaha aan joogtada aheyn ee ka midka ah Golaha Ammaanka.
“Wax walba waxay kuxiran yihiin shanta xubnood ee joogtada ah, oo weliba ku xiran tahay bishimaha mid ka mid ah inuu dhaqaajiyo,” ayuu ku yiri khudbad uu ka jeediyay intii lagu jiray shirkii 35-aad ee Guddiga Joogtada ah ee Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee OIC Istanbul.
Erdogan wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dunida islaamka ay aaminto nafteeda oo ay garwaaqsato weynaanta xooggeeda, isagoo tilmaamay in qaar si fudud ay u maamulaan dunida Islaamka, sababtoo ah ma ahan isku xirnaanshaha sidii deyr dhisan.
“In kasta oo waddamada Islaamka ay 24 boqolkiiba ka yihiin dadka dunida, waxay matalaan oo keliya 9.7 boqolkiiba ganacsiga adduunka.”
Erdogan wuxuu xusey in dalkiisu ugu yeeray Qaramada Midoobay inay xusaan 15-ka Maarso sanadkasta oo ay tahay Maalinta Caalamiga ah ee Wadajirka Caalamiga ee looga soo horjeedo Islaam neceybka.
Wuxuu ku eedeeyay Israel inaysan ixtiraamaynin xuquuqda Falastiinta ee nolosha iyo xuquuqdooda ay ku shaqeysan karaan ​​iyo lahaanshaha hanti, isagoo carrabka ku adkeeyay inay khatar ku tahay mustaqbalka gobolka iyo adduunka oo dhan.
Wuxuu sheegay in kuwa boobaya magaalada barakeysan ee Qudus ee saddexda diimood isla markaana ka dhigaya xaruntooda cibaadada waxa ay geleyaan oo kaliya khalad aad u weyn.